आगो बोकेर बतास
आगो बोकेर बतास किन चल्छ घरिघरि
कुरै कुरामा यो घर किन जल्छ घरिघरि ?
दृढ संकल्प बोकेर हुर्काएको जिन्दगी
जरा बिनाको रुख झैं किन ढल्छ घरिघरि ?
फल रसिलो पाउन स्याहारेको बोटमा
तीतो अमिलो टर्रो नै किन फल्छ घरिघरि ?
वर्षौं अघिको कसम अझै पुरा नगर्दै
आएँ आएँ म भन्दै किन छल्छ घरिघरि ?
कालो सबै नै नजाती ठान्ने मान्छे स्वयं नै
टिका भनेर“श्याम” रंग किन दल्छ घरिघरि ?